Shiinaha Warshadaha shumaca ee beeswax dabiiciga ah iyo kuwa iibiya | Badda
Waxaan nahay soo-saareyaal shumacyo xirfad-yaqaan ah, Caadi ahaan waxaan shumaca u habeysan nahay, sida shumacyada tiirarka, shumacyada xafaayadda ah, shumaca codkashumacyada dhalada, shumaca dhalada, shumacyada weelka, shumacyo qaabeysan, shumacyo shax ah, shumacyo shukulaato, iwm, agabku waxay noqon karaan shaybaarka paraffin, beeswax, wax soy, wax qumbaha, iwm.
1. Bey'ad saaxiibtinimo leh oo aamin ah, aan sun lahayn. Aad ugu nadiifi qiiq yar markii si sax ah loo jaro maadaama aysan saliid ku salaysnayn. Shumacyada beeswax 100% waa dabiici, lagamama sameeyo wax kiimiko ah oo kimikal ah.
Hore: 100% dabiiciga Beeswax gacanta ayaa shubay shumacyada taper
Xiga: tiirar beeswax waxay ku sameyneysaa shumacyo ololaya dhalada caagga ah
shumaca tiirka beeswax
Shumacyada codka codka beeswax
midabka qaanso roobaadka Beeswax dhalasho Stick shumac cus ...
shumaca beeswax, shumac shukulaato, Shumacyada codka codka beeswax, shumaca codka, shumaca beeswax, shumaca tiirka beeswax,